Syria: Filazana mikasika lalàna vaovao momba ny fanontàna anaty aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Novambra 2010 17:34 GMT
Tonga amin'ny dingana farany amin'ny fanekena azy izao ny lalàna vaovao iray momba ny e-publishing (fanontàna amin'ny aterineto) any Syria. Nahazo fandrakofana bebe ihany ity lalàna ity hatramin'ny nanombohan'ny fandrafetana azy tany amin'ny voalohandohan'ny 2010 tany. Mbola tsy tena azo ambara mazava ny antsipirihan'ity lalàna ity, ary hatreto aloha dia mifanipaka be ihany ny tatitra.
Raha ny tanjona ofisialin'ity lalàna ity dia ny fananganana rafitra ara-dalàna ho an'ireo vohikala misahana ny fampahalalam-baovao mba hiasa ao anatin'izany. Afaka miditra ho mpikambana ao amin'ny fikambanan'ny mpanao gazety ireo mpitatitra sy mpanao gazety ao amin'ny aterineto, izay manome azy ireo fahazoana hangataka karatra maha-mpanao gazety, manatrika resaka ataon'ny fanjakana amin'ny mpanao gazety, sy tombony maro hafa ihany koa. Nefa maro no manahy fa mety haneritery ny fahaleovantena an-tsisiny izay efa nositrahan'ireo vohikala mpitati-baovao hatry ny ela ihany koa. Ny tena manan-danja kokoa, ny mbola fanontaniana lehibe dia ny hoe, ho ampiharina amin'ireo mpitoraka bilaogy ihany koa ve ity lalàna ity?
Rehefa nitatitra mikasika ny fandrafetana lalàna tamin'ny May 2010 ny Syria Today, gazety Syriana voalohany amin'ny teny Anglisy, dia tsy nilaza na inona na inona mikasika ny hampiharana ny lalàna amin'ireo mpitoraka bilaogy izy, ary nanoso-kevitra hisian'ny safidy amin'ny làlan-kizorana.
Mbola tsy fantatra ny zavatra ho hita ao anatin'ity lalàna mikasika ny gazety anaty aterineto ity, nefa ireo tondro tato ho ato dia toa misarika hisaina fa mankamin'ny fanoratana anarana an-tsitrapo any amin'ny Minisiteran'ny Fampahalalam-baovao, izay afaka misafidy ny tranonkala ho hankatoavina amin'ny fomba ofisialy. Ny andininy naroso ho soso-kevitra kosa dia ny hoe manendry olona iray izay miandraikitra tanteraka ny votoatiny ireo vohikala.
Kanefa ny fandrakofan'ny New York Times dia mihevitra fa tokony ho voakasik'ity lalàna ity koa ireo mpitoraka bilaogy.
Kanefa tandindonin'ny zavon'ny tahotra sy ny tsindry aloka mitoetra ity faritra kely ity, ary ny sasany amin'ireo mpanao gazety dia matahotra sao dia ho faty tsy ho ela izany. Ny volavolan-dalàna iray nosoratana hifehezana ny gazety anaty aterineto dia ho tsindry hisatra ho an'ireo mpitoraka bilaogy sy mpanao gazety Syriana, hanery azy ireo hiditra ho mpikambana ao amin'ny fikambanan'ny mpanao gazety ka hametraka ny zavatra voasorany ho topaza-maso..
Na mbola tsy nisy aza ny lalàna voatokana ho amin'izany, dia maro ireo Syriana mpitoraka bilaogy sy mpanao gazety anaty aterineto no niharitra ny fihazonana an-tranomaizina sy ny fanitarana ny fihazonana noho ireo zavatra navoakany tao amin'ny aterineto. Ary tsy mazava ny fomba entin'ity lalàna vaovao ity hanovana ny sehatra misy ny gazety anaty aterineto any Syria. Mbola mitoetra ihany koa ireo fanontaniana mikasika ny fiantraikany sy ny fahaizan'ny governemanta mametraka lalàna tahaka izany amin'izao fotoana, indrindra ny fijerevana ny toetran'ny fitoraham-bilaogy sy ny zava-misy amin'izao fotoana fa mety maro ireo mpitoraka bilaogy no hiantefan'ity famerana ity indrindra fa efa tahaka ny mitoraka bilaogy tsy mitonona anarana ireo mihevitra fa mety ho tratran'izany faneriterena izany.